I-Best Best of Folk Music Konke kuma-2000
Uluhlu lweeMidlalo zeMculo eziMnandi zama-2000s
UGillian Welch, uNeil Young, uPete Seeger kunye neFleet Foxes Yenza uludwe
Ukusuka kwiCick Nickel ukuya eGillian Welch, iFleet Foxes kunye neAvett Brothers ukuya kwi-albhamu enkulu ye-protest ye-Neil ye-Young, i-2000 yayingumnye weminyaka emininzi yomculo omtsha. Olu luhlu lunikeza uluvo olugqithisileyo lwabanye abaculi abaphezulu, izitayela, kunye nezindlela ezivela kubantu abaqhelekileyo nabanamhlanje, abahlali be-bluegrass kunye ne-Americana ekupheleni kwe-21 Cent Century.
Woody Guthrie: 'I-Wire Wire: Woody Guthrie kuMsebenzi 1949'
Woody Guthrie Productions
UWoody Guthrie wayengenakuqondakala, omnye wabantu abakhulu abaculi beengoma ezize babambe umculo womculo waseMerika. Amazwi akhe nomculo kuye kwaphazamisa kwaye baphefumulela abaculi malunga naluphi na uhlobo lwentlobo, kwaye umsebenzi wakhe uyaqhubeka uvuliwe kwaye uphuhliswe. Ukurekhoda kweMidiya ekhompyutheni yenziwa ngekhompyutheni ye-bootleg yentsebenzo uGuthrie yanikezela kwi-YMCA eNew Jersey ngo-1949 kwaye iquka ukumodareyitha kunye nodliwano-ndlebe naye kunye nomkakhe, uMarjorie. Akuyona nje into ephawulekayo ebomini kunye nomsebenzi kaGuthrie, kodwa kunye neengxelo ezimbi zeembali zomculo waseMerika.
UGillian Welch: 'Ixesha (uMvelisi)'
UGillian Welch wayengomnye wabaculi abagqwesileyo ukuba bavele kwi-folk kunye ne-Americana kwindawo yexesha elizayo, eqala ngokufakwa kwakhe "O Mzalwana Uphi na?" isandi kunye nokulandela ukubandakanyeka kwakhe kwiqabane lomculo osekudala uDave Rawlings ekupheleni kweminyaka elishumi. Sekunjalo, "Ixesha (uMvelisi)" lisoloko libhekwa njengomsebenzi wakhe ogqwesileyo, ebonisa ezinye zeentlungu ezinzima kunye nezivuselelayo, iingoma ezilula zeminyaka yamuva. Umsebenzi weWellch uye wanconywa kakhulu phakathi kwamanye abhali beengoma abaye bancedisa ukuseta ibha apho umculo womculo wangoku ulinganiswa ngawo.
URobert Plant no-Alison Krauss: 'Ukukhulisa isandi'
"Ekukhuliseni iSand," uRobert Plant no-Alison Krauss bahlalutya kwiintlobo zombini zabaculi, ngelixa bezama ukufumana umhlaba omtsha. Enyanisweni, yintoni enye onokuyilindela ngokubambisana phakathi kwe-bluegrass prodigy kunye nonqulo lwamatye, ngaphandle kwesinye sezirekhodi ezilungileyo konyaka okhutshwe ngawo, ngo-2007? Zomibini izityalo kunye neKrauss ziyaziwa ngokuba yi-envelope-ukunyusa abatshazi kwiindawo zabo, ngoko akumangalisi ukuba bakwazi ukuvelisa isandi esitsha esitsha. Isiphumo sasiyifikelwe kwi-Grammy Awards ka-2009.
'Mzalwana, phi na?' Soundtrack
Isandi sokuthi " O Mzalwana apho Ukhona Wena " inxaxheba ekuveliseni i-bluegrass kunye nomculo wendabuko waseMelika ubuyele kwi-consciousness. Umkhiqizi womculo weengcambu ohlonishwayo kakhulu uT Bone Burnett wayenomdla omkhulu phambi kokuba "O Mzalwana" kodwa uye waba nguyena wabavelisi abafunayo kakhulu emhlabeni. Esi sandi sithengise izigidi zeekopi kwaye sathola ama-Grammy Awards ama-2002 ngo-2002, kuquka ne-albhamu yonyaka.
Neil Young: 'Ukuphila NgeMfazwe'
Ngo-2006, imfazwe yase-Iraq yayingabonakali kakhulu kwaye ingqungquthela yomculo yokubhikisha yayingeke ifinyelele kwizinto eziqhelekileyo, ezigama. I-albhamu ye-Neil Young ethi " Ukuphila NgeMfazwe" yinto enye eqinile. Erekhodiweyo enye yawa i-swoop ne-choir epheleleyo, " Ukuphila NgeMfazwe" ithatha ukukhawuleza kunye namandla ombutho woxolo kwaye ngokuqinisekileyo yayinye yezona albhamu ezigqithisileyo zezobupolitika zonyaka.
U Patty Griffin: 'Abantwana abaqhubela phambili'
Kwakhona, uPatty Griffin wabulala abalandeli bakhe ngokuxuba okuphekwe kakuhle kwe-blues, i-R & B kunye neeMaculo zaseMerika. Umsebenzi weGriffin uye wadlala kunye nekhaya elilodwa emva komnye, kwaye "Abantwana Abaqhubelayo" kwakungekho nto. Emva kweminyaka yama-albhamu amakhulu, kufuneka uzibuze, njani kunokwenzeka ukuba enye ibhinqa iqhubeke ingqongqo ngaphandle komculo omkhulu? Ukuxhaswa ngu-Emmylou Harris kumzekeliso "I-Trapeze" ayizange yenzakele.
USimon & Garfunkel: 'Hlala ngo-1969'
Ngowe-1969, uSimon & Garfunkel ubonise ukuba yikuphi uhambo lokugqibela lomsebenzi wabo. Kwi-"Live 1969," sifumana iwindi ibe yimisebenzi emithandathu kunye nomtya welo tyelelo. Isiphumo singenakucingisisa kwezinye zeengoma ezikhulu kunabo bonke abaye bahlanganiswa ngexesha lokuphakama komsebenzi wabo kunye.
USteve Earle: 'iidolophu'
IiNkcukacha zeNew West
Intetho kaSteve Earle kwiqhawe lakhe lokubhala ingoma iCapees Van Zandt , elibizwa ngokuthe tye ngeedolophu, kubonakala ngathi lide lide lizayo, nangona liye lathethwa nje ngexeshana. Ukuqwalasela ukuhlonipha i-Earle yomsebenzi womsebenzi ongaqhelekanga kaVan Zandt, akumangalisi ukuba le diski yomrhumo yenye yeyona nto ihamba phambili ngowama-2009 kunye neminyaka elishumi, ngaloo nto.
USam Baker: 'Ihlabathi elihle'
Ukulimala kukaSam Baker emva kokuqhuma kwesibhumbisi kwamatye kungamshiya emzimbeni, kodwa kwakungeke kuphazamise italente yakhe engavamile yokubhala ingoma. I-trilogy yama-albhamu ayikhululwe ngomxholo wenceba ibe yinye yeengxelo ezigqwesileyo ezongezwe kwi-songbook yase-Amerika kwiminyaka yamuva nje, kwaye eyona nto ibhetele "yihlabathi elihle." Igama lakhe alinakuchukumisa, kodwa umculo uthetha.
Bon Iver: 'NgoEmmma, ngonaphakade Ago'
Abangabalulekanga bambalwa badwelise uBon Iver ka "Emma, ​​Forever Ago" njengolunye lwee-albhamu ezilungileyo kakhulu zonyaka ka-2008. Nangona kungengomculo wendabuko, uBol Iver wenza i-albhamu ehlukileyo egxininise ngokupheleleyo kwiingoma ezinkulu, ezithatha kwiimbalo ezininzi izitayela ezingasetyenziswayo. Isiphumo sinembile, sibuhlungu kwaye sihle.
Intsimbi newayini: 'Imihla yethu engapheliyo'
Intsimbi kunye neewayini zokuqala ezirekhodiweyo zodwa zazingcwele zilahla, zenza uphawu lokuhamba ngokukhululekileyo kumculo we-indie oqhubekileyo oqhubekileyo wee-90s. Ukukhululwa kwakhe ngo-2004, " Iintsuku Zethu Ezingapheliyo." ibandakanya iimvumi ezibalaseleyo, ezifana ne "iSodom, i-South Georgia" kunye ne "Sunset Ngokukhawuleza ayikhohliweyo."
I-Case ye-Neko: 'I-Cyclone ephakathi'
I- albhamu ye-studio ye-I-studio yesine epheleleyo ye-studio iboniswe ukuba iyathandwa kakhulu kunye nomthengisi omkhulu. Akuzange nje kufike kwiBhodi ye-Billboard ye-Top 20, nayo yafumana indawo yayo phakathi kwama-albhamu amanqaku amaninzi kunye nabalandeli be-albhamu abathandayo.
Avett Brothers: 'Iimvakalelo'
Ngokungathandabuzekiyo, iAvett Brothers yayingenye yezinto eziphawulekayo zokuphulukana kweyeshumi leminyaka yee-2000, kwaye ininzi yeyona nto incinci ingenxa ye "Umoya." Ngoxa ukukhululwa kwabo ngo-2009 kwaba yimpumelelo kwezoshishino, "i-Emotionalism" yanceda abaphulaphuli abatsha kwi-style ye-indie ingcambu yomculo kunye nokuqinisa indawo yabazalwana kwiimpawu zomculo zangoku.
I-Nickel Creek: 'I-Nickel Creek'
I-Nickel Creek yayingenye yeemigangatho ezifanelekileyo zokubetha indawo ye-bluegrass yangoku. Kuyo yonke inxaxheba yabasebenzi bebhanki-eside, ubuchule babo obuyingqungquthela bube ngcono kwaye bubhetele. Bawususa iminyaka elishumi nge-albhamu eyaziwayo ebizwa ngokuba ngu-Alison Krauss kunye neengoma zabo ezilungileyo.
UPete Seeger: 'Ngo-89'
Esinye seziganeko ezinkulu kwihlabathi lomculo ngexesha lomnyaka wee-2000 kwakubhiyozo lokuzalwa kuka- Pete Seeger . Kwaphawulwa ngamakhonsathi kuwo wonke umhlaba, kubandakanywa nekhonsathi enkulu eneenkwenkwezi eMadison Square Garden. Kodwa ngaphambi kokuba kubekho ukukhutshwa kwe-albhamu ye-Seeer "Kwi-89," eneempawu ezingama-32 eziqhuba umdlalo we-Seeger umyalelo ongaqhelekanga kunye nobubanzi bokuxabisa kumculo womculo waseMerika.
U-Ani DiFranco: 'Ukudumala / ukukhumbula'
Abalungileyo Babe Records
U-Ani DiFranco uye waba ngumnye wabadlali abanobuchule beengoma nabaculi kunye nabalathisi-balawuli beesithili. Wayekrazula i-2000s nge-disc-disc release eyayifumaneka njenge-albhamu ebeyilungiselele umsebenzi wayo wonke loo nto. Ubuntu, ezombusazwe, obusondeleyo kunye nobungqungquthela, "Ukumemeza / ukukhumbula" kwabonisa kwakhona umyalelo wakhe oqinileyo weqela lakhe elixhasayo.
ULaura Veirs wehlile ama-albhamu ambalwa ngexesha elikuyo, kodwa "i-Saltbreaker" yinto enye ebaluleke kakhulu, eyinkimbinkimbi, yokudala phakathi kwabo. Okokuqala, kukho iqela lakhe elinobuchule elinomsoco osibetha ngesandla kunye nezinye idiosyncrasies pepper i-disc ngexesha eligqibeleleyo. Emva koko kukho iiNgoma ezithandekayo zokubhala iingoma kunye neengqungquthela, ukudonsa ngokubanzi kwimveli yendabuko kunye nelizwe elincinci.
UJustin Townes Earle: 'Ubomi obuhle'
Ngasemva kweAvett Brothers , u-Justin Townes Earle wayengomnye wabanomdla abasaqalayo-abaculi beengoma kwixesha langoku kunye ne-Americana kwii-2000s. Ukuqala nge-EP yakhe yokuzikhupha i-"Yuma" kwaye ilandela ukuhamba kwayo ubude obude, u-Earle wanyusa izityholo zikaWowody Guthrie kunye noHank Williams Sr. ukuzisa abantu abadumile kunye nomculo welizwe ukubuyela kwiingcambu zawo.
UDave Bazan: 'Uqalekise amaSebe akho'
I-albhamu yokuqala ye-solo epheleleyo yeDave Bazan yenza amaza ambalwa. Akunjalo nje kuphela kwaye ngokukhawuleza ulwa neqela leedemon, kodwa ingoma yakhe ingummangaliso - ngokungahambi kakuhle ngamanye amaxesha - obusondeleyo.
Iziqhubu ze-Fleet: 'I-Fleet Fox'
I-Fleet Foxes yayisinye isenzo esikhulu sokuphumula kweshumi elishumi, ukudonsa umculo weMntla-ntshonalanga oqhutywe ngumntu oqhutyelwayo ngokuqhubekayo ekugqibeleni. Le diski enegama elizimeleyo yayicingwa ngokukhululeka kunoma yiphi na uhlobo ngo-2008 kwaye ngokuqinisekileyo ithatha amanyathelo ekukhangiseni umculo womculo kwakhona.
Ii-CD Starter Starter
Abaphambili aba-7 abavelisi njengo-Kanye West
I-Rap Rap I-Worst Worsters Great Rappers
I-10 yezona ndawo ziphezulu zezobugcisa
I-Top 10 ekhunjulwayo I-Pop Song ingoma ka-2013
Iimpawu ze-10 eziphezulu ze-Fall
Izwe lomculo Iingoma zeeNgoma
I-Top 10 Barbra Streisand Iingoma
I-Essential Flamenco Starter CDs
U-Attila the Hun Die njani?
Yiyiphi i-I-Olympics ye-Olympic Golf Tournament Iifomati kunye neNgcambu?
Kutheni Abantu Beba NgamaPagan okanye eWiccan?
Indlela Yokuxelela Abazali Bakho Ufuna Ukutshintshela Iikholeji
Indlela Yokunikezela Ngokukhawuleza Ngamayeza eReiki
Ukufudumala kweeYunivesiti zeeYunivesithi
I-Cal State yaseSan Bernardino I-Admissions
AmaShramente amaKatolika aseKatolika
I-Top 11 Eninzi yeeNcwadi zeeComic ezixabisekileyo
Umda weMaya yamandulo
Yintoni i-Levee? Ukuphonononga amathuba
Indlela yokudweba uPaint-Field Field
Ubulungisa: I-Second Cardinal Virtue
Ukunyamezela kwezilwanyana: I-Psychology ivela kwi "Cat Lady"
'INkosi yaseLear': uMthetho 3 Uhlalutyo
Yintoni iCharles Schwab Cup?
10 Iinkcukacha Ngeziphakamiso zeSpain
Ngaba Unokwenza Imoto Yakho Ngempela?
I-Stock Market Iintlanzi ezivela kwiiHlathi zaseLate Night
I-14 iDalai Lamas ukusuka ngo-1391 ukuya kwi-Present
Konke malunga Nentsapho yeSikh
CAM o estatus refugiado para menores e Honduras, eSalvador y Guatemala
Indlela Yokubamba Umkhosi WamaKhristu Ngomntwana Wakho